Zava-dehibe ny fiainana Nizeriana: Tena?
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Zava-dehibe ny fiainana Nizeriana: Tena?
56 ireo mpihetsiketsika tsy manan-tsiny notifirin'ny tafika Nizeriana. Mihorohoro ny olom-pirenena ary miafina ao an-tranony na eny an-dalambe miady.
Hoy ny bitsika iray: “Manomboka androany, te-hangataka amin'ny olona rehetra eto aho. Raha mahita olona mihazona ny SARS / SWAT ianao, azafady, ajanony ary alao antoka fa tsy mandray ilay olona izy ireo. Azafady, vorio io toerana io, apetraho ny fiara, aza mitondra fiara na pass pass fotsiny. Azafady, ampitao io! #EndSARS . "
eTurboNews niresaka tamin'i Abigel, mpamaky monina ao Lagos. Hoy ny tatitra nataony:
Tanora Lagos any Nizeria dia nanohitra ny herisetran'ny polisy sy ny fitondram-panjakana ratsy ary nampiasa ny tenifototra #EndSars #Endpolicebrutality #Endbadgovernance nandritra ny folo taona lasa tany Nizeria. Niantso ny governemanta izy ireo hanaparitaka izany, izay namboariny, saingy misy olana hafa mampiavaka azy izay noresahin'izy ireo ihany koa.
“Ny mpanao lalàna eto amintsika no be karama indrindra eran'izao tontolo izao, kanefa mandao ny tetik'asa fifanampiana sosialy mety hahasoa ny olom-pirenena izy ireo. Hanoanana, fahantrana ary tsy an'asa be loatra eto amin'ny tany. Olana maro tokoa, "hoy i Abigel.
Farafahakeliny olona 56 no maty nanerana an'i Nizeria hatramin'ny taona #EndSARS nanomboka ny 8 Oktobra ny fihetsiketsehana, ary 38 no namoy ny ainy manerana ny firenena tamin'ny talata fotsiny, raha ny filazan'ny vondrona mpiaro ny zon'olombelona Amnesty International. Nitohy ny tsy fandriam-pahalemana tamin'ny alakamisy raha nanako ny poa-basy tao amin'ny manodidina an'i Ikoyi manan-karena ao Lagos.
Ny filohan'i Nizeria, Muhammadu Buhari, dia niantso ny hampitsaharana ny fihetsiketsehana manerana ny firenena manohitra ny herisetra ataon'ny polisy saingy tsy niresaka mivantana momba ny fitifirana nahafatesana mpanao fihetsiketsehana milamina
Niantso ny mpanao fihetsiketsehana i Buhari mba “hanohitra ny fakam-panahy ampiasain'ny singa mpanohitra sasany hiteraka korontana.”
Nanohy nilaza i Abigel: “Nandritra ireo fihetsiketsehana ireo dia nitifitra ireo tanora mpanao fihetsiketsehana ny miaramila Nizeriana ka maro no maty sy naratra. Izany dia nanjary fianjerana sy hanoanana, fandoroana olona, ​​famonoana olona sns.
“Tsy nisy ny fihantsiana.
“Niara-nipetraka tamin'ny tany tao amin'ny Lekki Tollgate any Lagos ireo tanora ary nivory nandritra ny 2 herinandro lasa izay. Raha nipetraka tamin'ny tany izy ireo dia nitana ny sainam-pirenena nihira ny hiram-pirenena, nefa nitifitra azy ireo ny miaramila.
“Mampihoron-koditra aho, malahelo sy ory tanteraka.
“Tsy nisy nahatezitra olona. Tsy misy, tsy misy mihitsy. Nesorina tokoa ny SARS fa tsy tokony ho taktika amin'ny famaliana ny fitakiana dia nanangana fitaovam-piarovana hafa antsoina hoe SWAT ny FG. Ka nahatsapa ny olona hoe: 'aona tsy misy fahatsapana izany.' Vao mainka nahatezitra ny olom-pirenena izany. Ka be ny fahatezerana tao amin'ny olom-pirenena noho ny fitondram-panjakana ratsy sy ny tsy fari-piainan'izy ireo. ”
Sambany vao niresaka tamin'ny mpanao fihetsiketsehana ny filoha taorian'ny tapa-bolana.
Ny hafatra avy any amin'ny manodidina an'i Afrika dia navoaka tao amin'ny vondrona fifanakalozan-kevitra momba ny fizahan-tany any Afrika izay misy ny hafatra avy any Kenya manao hoe:
Miray hina amin'ireo rahalahintsika sy anabavintsika Nizeriana aho amin'izao fotoana sarotra izao. Misaona ny zanany i Afrika #endsars #Nigerianlivesmatter 🇳🇬🇳🇬🇳🇬
Cuthbert Ncube, filohan'ny komity fizahan-tany afrikanina nilaza hoe:
“Miray hina amin'ny vahoaka Nizeria izahay. Miara-miory amin'ny fianakavian'ireo namoy ny ainy, ary ny fiaraha-miory ary firariana fatratra mba ho sitrana amin'ireo naratra sy ireo izay norobaina sy norobaina ny orinasany.
"Miantso fandriam-pahalemana izahay, indrindra raha jerena ny toerana anjakan'i Nizeria eo amin'ny kaontinanta rehefa manomboka ny fanarenana sy fanokafana ary famerenana indray ny fizahantany i Afrika."